बीपी विचारको मृत्यु, नालायक नेता र पागलको यात्रा « Nepal Bahas
‘खत्तम’को विरोध नै ‘उत्तम’को प्रमाण होइन, लोकतन्त्रको रित्तो ढ्वाङ् भएको सवुतचाहिँ हो ।
प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०७८, बुधबार १२:५१
जहाँ धम्कीको बोलवाला हुन्छ, त्यहाँ विचारको विजोग हुन्छ । बीपी भन्नुहुन्थ्यो, “सत्यको मुख थुनिदियो भने मिथ्याको थुतुनो उघ्रिन्छ ।” अर्थात मिथ्याको थुतुनो उघ्रिएको ठाउँमा सत्यको हत्या हुन्छ । अपराधिक प्रवृत्तिबाट निर्देशित राजनीति कदापि सदाचारी हुँदैन । जुन पार्टीमा उसैको इतिहासको कसीले खारिएका विचारधारा, नीति र सिद्धान्तकै हत्या हुन्छ, त्यस पार्टीको भविष्य बाँकी रहँदैन ।
आजको नेपाली कांग्रेसमा त्यस्तो भवितब्य उत्पन्न भइसकेको छ । कांग्रेसको नियति प्रजा परिषदकै जस्तो होला भन्ने डरको चिसो यसकै नेता (गणेशमान पुत्र) प्रकाशमान सिंहले व्यक्त गरिसके । त्यो डर जनताका कारणले उत्पन्न भएको होइन नेता र उनीहरूको जुँगाको लडाईँका कारण भएको हो ।
पशुपति शर्माको व्यंग्य–गीत “लुट्न सके लूट कान्छा……..” ले दुई वर्षअघि ओली नेतृत्वको सत्तामा भुकम्प लगाएकै स्तरको जनतामा चर्चा र वाहवाही किन पायो भने नेताहरूको चरित्रले ल्याएको दुरावस्था त्यो गीतले समेटेको थियो । झट्ट सुन्दा त्यस गीतले देशमा लुट खसोट मच्चाउन हौसला दिएजस्तो लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले बीपीको नाम र सन्दर्भ लिएर उहाँसँग आफ्नो सान्निध्यका प्रेरक प्रसङ्ग सुनाएको अपवादका रूपमा पनि थाहा पाएको छैन । वास्तवमा देउबा के बोल्छन्, स्रोताले बुझ्नै सक्दैनन् ।
तर गहिरो अर्थमा बुझ्ने हो भने सत्तामा बसेका र बसिकेका सबै पार्टीको चरित्र र हर्कतलाई यसले घतलाग्दो प्रकारले कभर गरेको छ । पार्टी वा नेतामात्र होइन, डाक्टर, निर्माण व्यवसायी, शिक्षक, कर्मचारीदेखि ट्राफिक व्यवस्थासम्मको विकृति र विसंगतिलाई हिट गरेको छ । सिद्धान्तहिनता र भ्रष्ट्राचारले जर्जर बनाएको आजको अवस्थालाई चित्रण गर्न यस गीतले सफलता पाएको छ । वास्तवमा अहिलेको राज्य र व्यवस्थाप्रति जनताको भावना मुखरित गर्नमा यही गीत पूर्ण सफल छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जब मञ्चमा उभिएर बोल्न थाल्छन्, उनी पार्टीका योजना, लक्ष, नीति र सिद्धान्तबारे केही बोल्न सक्दैनन् । जानेको भए पो बोलुन् । पार्टी–सभापतिले सिङ्गो पार्टीको साझा आवाज बोल्नुपर्ने हो । कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा इतिहासका कतिपय सन्दर्भ प्रकारान्तरले दोहोरिएर आएको पाइन्छ ।
त्यो अवस्थामा बीपी, गणेशमानजी, सुवर्णजी, सूर्यबाबुजस्ता राजनेताले कसरी समस्याको निराकरण गरेका थिए भन्ने सवालमा आजका पार्टी सभापतिलाई ती सन्दर्भ र समाधानमा अपनाइएका उपाय खोज्न मतलब छैन । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले बीपीको नाम र सन्दर्भ लिएर उहाँसँग आफ्नो सान्निध्यका प्रेरक प्रसङ्ग सुनाएको अपवादका रूपमा पनि थाहा पाएको छैन । वास्तवमा देउबा के बोल्छन्, स्रोताले बुझ्नै सक्दैनन् ।
कम्युनिस्टहरू आफ्नो खुबी, विलक्षणता र लोकप्रियताको कारण उँभो लागेका होइनन् । उनीहरु आफ्नै विगतले भविष्य मासिसकेको र वर्तमानमा पतनतिर धकेलिएको झुण्ड हुन् । उनीहरूले आफ्नै पार्टीमा सहमति र एकता कायम गर्न नसकेर ओली, नेपाल र प्रचण्डका ३ पार्टीमा विभाजित भएका छन् भने त्यस्ता पार्टीले सहमति, गठबन्धन वा मोर्चाको हठ लगाउनु कति सुहाउँदो होला ? पार्टीका द्वयम दर्जाका नेताले बोल्ने भाषा देशको प्रधानमन्त्री र पार्टीको सर्वोच्च पदाधिकारीले बोल्नु कुरीकुरीलाग्दो सुनिन्छ । ‘खत्तम’को विरोध नै ‘उत्तम’को प्रमाण होइन, लोकतन्त्रको रित्तो ढ्वाङ् भएको सवुतचाहिँ हो ।
देउवा नेतृत्वको पार्टीमा कांग्रेसजन हुनलाई बुद्धि नचाहिने भइसक्यो । विचार र बुद्धि हुनु नै अभिशापजस्तो हुँदैछ र इमानदार तथा निष्ठावान कार्यकर्ता हुनु बेवकुफ हुनु हो भनी हालै एक कांग्रेसजनले निराशाका सुस्केरासँग तीतो अनुभव पोखे । यस्तो धुन्धुकारी चरित्र पार्टीमा हौसिनुको कारण चिन्तनहिनता र पार्टीभित्रै बीपीवादको हत्या हो ।
कांग्रेसका लागि जनतामा पुग्ने वैचारिक राजमार्ग बनाउनुका साथै पार्टीका जरा समाजमा गहिरोसम्म पुर्याउने काम बीपी कोइरालाले गर्नुभएको हो । सुवर्णजी, गणेशमानजी, किसुनजी, सूर्यबाबुले पनि पार्टीमा कालजयी विचार प्रतिपादन गर्नुभयो, तर बीपीको हाराहारीमा आउनसक्ने अर्को नेता कांग्रेसमा त के नेपालका कुनै पार्टीमा जन्मेनन् । बिडम्बना ! बीपीका विचारधाराको तेजोवध गर्ने काम पार्टीभित्र कार्यरत उहाँकै परिवारजनबाट भयो । यसमा सबैभन्दा ठूलो ‘कीर्तिमान्’ धेरैले स्थापित गर्नुभएको थियो । अहिले आएर बीपीलाई उपेक्षा तथा विस्मृतिमा पुर्याउने कसरत शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् ।
बीपीले कांग्रेसलाई जनताका बीच क्रियाशील हुने वैचारिक र प्रजातान्त्रिक संस्कारयुक्त कार्यदिशा सिकाउनु भयो । पार्टीको मध्यमार्गी यात्रा र जनताको उच्चतम हितजन्य गन्तब्य तय गर्नुभयो । राजतन्त्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, संविधान, दक्षिण एशियामा नेपालको भूमिका, राजनीतिक कार्यकर्ताको जनतामा भूमिका, विदेशी खतरा, उग्रवाद, अधिनायकवाद, अर्थतन्त्रको ढाँचा, विरोधी पक्षसँगको सम्बन्ध भारत, चीन, साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति, आदि यावत पक्षमा उहाँले सुस्पष्ट विचारधारा छोडेर जानुभएको छ ।
मुखमा जे आउँछ, फतफताइदिने आजका नेताजस्तो हुनुहुन्नथ्यो बीपी । नसोची नबोल्ने र बोलेको कुरा शाश्वत सत्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उहाँ कहिल्यै चुक्नुभएन । कुनै कुरा सार्वजनिक गर्नुछ भने उहाँ एउटा कुरामा ध्यान दिन कहिल्यै चुक्नुभएन कि आफूले बोल्ने कुरामा मुलुक र जनताको हित लुकेको हुन्छ हुँदैन । अतार्किक बकवास र जनहित वा राष्ट्रहितको सवालबाट च्यूत भएर उहाँले कहिल्यै बोल्नु भएन । आफ्ना विचार राख्दा सैद्धान्तिक आलोचना बाहेक ओठे जवाफ र ठाडो गाली उहाँले कहिल्यै प्रयोग गर्नुभएन । बीपीका बारेमा यस्ता धेरै सन्दर्भ र प्रसङ्ग छन् कि कांग्रेसले उहाँका विचारधारका बारेमा निरन्तर बहस चलाइरहन सक्छ । अनुसन्धान र विश्लेषण भइरहनु पर्ने हो । तर वैचारिक राजनीति पार्टीभित्र शून्यप्रायः भइसकेको छ ।
‘आफ्नै लाशको मलामी जाने’ भनी गीतको अर्थ कांग्रेस नै भइरहेको त छैन ? यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफैलाई छाम्ने बेला आएको देखिन्छ । ‘बीपीका विचार आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्’ भन्ने कांग्रेस नेताहरू ‘उहाँका सपना साकार पार्छौ’ चाहिँ किन भन्दैनन् ? यही प्रश्नमा बीपी बारे कांग्रेस नेताहरूको कलुषित नियत उदाङ्गिन पुग्छ ।
आजको नेपाली कांग्रेस बीपीले दिएको मार्गदर्शनबाट च्यूत भएको छ । उहाँले बसालेका अनुकरणीय परिपाटी र संस्कारलाई पनि यस पार्टीले निर्ममताका साथ तोडेको छ । त्यही कारण हो, पछिल्लो जनआन्दोलन यताको राजनीतिमा कांग्रेसले लगातार अभूतपूर्व धक्का ब्यहोर्नु परिरहेको छ ।
२०७४ मा भएका तीन तहका निर्वाचनमा त कांग्रेसको हुर्मत नै गुमाउने काम नेतृत्वका कारणले भएको छ । यसको क्षतिपूर्ति हुन त्यस पार्टीले अर्को बीपी कोइराला नै जन्माउनु पर्छ । बीपीले देखाएको बाटोमा कांग्रेसले आफूलाई फर्काउन सक्यो भने त्यो नै बीपीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली र पार्टी तथा तमाम प्रजातन्त्रवादीप्रति न्याय हुनेछ ।